WSISblogs.org: Hevitra tokony hohatsaraina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Janoary 2019 4:08 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Desambra 2004)
Ny alina lasa teo, dia niditra aterineto aho ary nividy ny anaran-tsehatra wsisblogs.org sy wsisblogs.com.
Araka ny efa fantatry ny maro aminareo, herintaona latsaka sisa dia ho avy ny Fihaonambe Manerantany momba ny Fiarahamonin'ny Vaovao (World Summit on the Information Society) (WSIS) 2005. Karakarain'ny Firenena Mikambana sy ny ITU, hiezaka hamita ny asan'ny fihaonambe WSIS voalohany tamin'ny desambra 2003 ny WSIS. Nandritra io fihaonambe io tany Geneva, niaraka ireo mpitondra manerantany mba hamaha ny olana momba ny hantsana nomerika, ny fitantanana ny aterineto, ny fahalalahana an-tserasera ary ireo olana lehibe hafa. Nisy ireo vondrona bilaogera vitsivitsy avy any Geneva, anisan'izany ny tenako sy ireo olona mahafinaritra ao amin'ny DailySummit.net..
Tsy isalasalana fa mbola hisy maro hafa amin'ny fihaonana manaraka, anisan'izany ireo solontena, mpanao gazety matihanina, mpanao gazety olon-tsotra ary hafa. Ankoatra izany, hisy fivoriam-be roa lehibe, na prepcoms (fivoriana fiomanana) atsy ho atsy; ireo fivoriana ireo dia toerana izay mety hanapahana hevitra momba ny ankamaroan'ireo vokatra ara-politikan'ny fihaonambe. Tokony hanantena ny fisian'ny fampahalalam-baovao betsaka ve isika? Milaza ny mifanohitra amin'izany ny teo aloha. Tamin'ny fivoriana fiomanana tao Tonizia tamin'ny volana jona (2004) lasa teo, iray amin'ireo bilaogera telo na efatra tonga nanatrika aho, izay samy nisolo tena ny fiarahamonim-pirenena; tsy nisy ny fampahalalam-baovao mahazatra tonga, na filazam-baovao lehibe taorian'ny zava-misy.
Vao 10 andro lasa izay, nitaraina tao amin'ny bilaoginy momba ny tsy fisian'ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao mahazatra momba ny fitantanana ny aterineto, izay noresahana nandritra ny fivoriana ICANN vao haingana tao Capetown i Rebecca MacKinnon. Ireo bilaogera marobe no nitantara ny hetsika, hoy izy nanamarika: “Tsy misy filazam-baovao lehibe avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra hatramin'izao. Angamba tsy mora ny mahatakatra na variana toy ny FCC, saingy tsy dia zava-dehibe (na raha tsy izany intsony) ho an'ny ho avin'ny fifandraisantsika manerantany ve izany? “
Izany rehetra izany dia nahatonga ahy nanontany tena momba ny WSIS, ireo fanomanana ny ho avy sy ireo fivoriana hafa momba ny WSIS, ary ny tsy fahampian'ny kalitaon'ny fitantaran'ny media. Araka ny fijeriko, dia anjaran'ny fiarahamonim-pirenena – anisan'izany ireo bilaogera sivika – ny misahana ny andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny famoahana ireo vokatra ara-politika misy amin'izao fotoana izao, ary manentana ny vahoaka amin'ny aterineto mba ho liana amin'izany.
Izany rehetra izany nitambolina tao an-dohako halina, nividy ny anaran-tsehatra WSISblogs.org sy WSISblogs.com aho. Tsy nieritreritra izay tokony hatao amin'izany aho, nefa azoko atao ny mieritreritra zavatra toy ny ConventionBloggers.com an'i Dave Winer, izay nanangona ireo bilaogera rehetra mitantara momba ny Fifanarahana Nasionaly Demaokraty sy Repoblikana tamin'ny fahavaratra lasa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, tranonkala iray ahafahanao mahita ireo lahatsoratra farany avy amin'ireo bilaogera rehetra mandray anjara sy/na mijery ny fizotran'ny WSIS. Azo alamina araka ny vokatra ara-politika lehibe sy lohahevitra mifandraika amin'ny WSIS ny tranonkala, mba ahafahan'ny mpiserasera mijery ireo bilaogy farany momba ny fitantanana ny aterineto, ny hantsana nomerika, ireo hetsi-panoherana, ny olan'ny zon'olombelona sns araka ny fitrangàn'ireo. Tsara ihany koa ny manome fahafahana ireo bilaogera mba hametraka ny RSSn'izy ireo ao amin'ny tranonkala, satria tsy voatery hahazo ny lisitra ofisialiin'ny olona izay mibilaogy alohan'ny hetsika mifandraika amin'ny WSIS.
Na dia tsy manao na inona na inona aza isika, dia azo inoana fa hisy bilaogera marobe ao amin'ny WSIS: bilaogera am-polony maro, mibilaogy momba ireo lohahevitra isan-karazany, amin'ny karazana fiteny sy endrika samihafa, manome fidirana tsy misy sakana sy sivana ao amin'ny WSIS ho an'ny daholobe. Eritrereto hoe afaka mandamina azy rehetra amin'ny toerana iray isika.
Na izany na tsy izany, hevitra fotsiny izany. Te-handre izay eritreretin'ny hafa izahay. -andy